musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Indonesia Kuputsa Nhau » Indonesia Kufamba neKushanya: COVID Impact Report
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • Indonesia Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Indonesia COVID-19 Impact
Nyika yeindasitiri yeKufamba neKushanya yakapa 46.6 muzana pasi peGDP yeIndonesia pakati pa2019 na2020 nekuda kwe COVID-19.
Indonesia yakarasikirwa nemabasa chiuru nemazana matatu nemakumi matatu nemakumi mairi nematanhatu kubva pakatanga nyonganiso yeCOVID-1,377,200, yakatanga kuwanikwa muna Zvita 19, yakaenzana inopfuura gumi muzana.
Mu2019, 13,180,400 yekufambisa uye yekushanya mabasa akapa kune hupfumi hweIndonesia.
Mupiro weGross Domestic Product (GDP) webazi rezvekushanya muIndonesia wakabva pa5.9 muzana kusvika pa3.2 muzana kubva 2019 kusvika 2020.
Vashanyi vepasi rose vanoshandisa mari kubva paUS $ 259.817 bhiriyoni kuenda kuUS $ 56,083.1 bhiriyoni, 78.4 muzana kurasikirwa kubva 2019 kusvika 2020. Vashanyi vepamba pamari yakashandiswa kubva paUS $ 313.698 bhiriyoni kuenda kuUS $ 203.298 bhiriyoni kana 35.2 muzana pasi. Huwandu huchienzanisa mashandisirwo emumba hwaive makumi mashanu neshanu muzana mu55 uye 2019 muzana muna 78. Mari yepasi rose yaive makumi mashanu neshanu muzana mu2020 uye 45 muzana muna2019.
Musika wekuzorora wekuzorora wakakwira kuratidza zvikamu zvishanu kubva muzana zvekuzorora zvemufambi muIndonesia.
Vashanu vepamusoro vanosvika kuIndonesia muna 5 vaive:
- Malaysia: 25 muzana
- China: 18 muzana
- Singapore: 15 muzana
- Australia: 6 muzana
- India: 6 muzana
Misoro mishanu inobuda kunze uko vanhu vanobva kuIndonesia vanofarira kuenda kune:
- Malaysia: 46 muzana
- Singapore: 16 muzana
- Saudi Arabia: 8 muzana
- Thailand: 5 muzana
- Japan: 4 muzana
Iyi data yakavakirwa pane iyo WTTC Economic Trends Report, inoratidza COVID-19 inokatyamadza zvakanyanya paKufamba neKushanya kutenderera pasirese.